Iindaba - Izikhokelo zothintelo lobhubhane kwiikholeji zolawulo lokufikelela kukhuseleko
Okwangoku, iikholeji kunye neeyunivesithi kwilizwe lonke sele zibuyele esikolweni enye emva kwenye, kwaye uthintelo nolawulo lobhubhane lujongene nomjikelo omtsha womngeni.Ukuze kuqinisekiswe impilo kunye nokhuseleko lootitshala nabafundi, iShandong Well Data Co., Ltd. yenze ulawulo lwedijithali lusasaze ukhuseleko lwendawo yonke kunye nolawulo ekhampasini, kwaye yanceda abaphathi besikolo ukuba baqonde olona lawulo lubanzi kunye utyalo-mali olulula.
Abafundi bangena esikolweni, njani ukulawula?
Kwisango lesikolo kunye nendawo yokuphuma yokungena, i-terminal inokuchonga ngokukhawuleza isazisi somfundi ngokuswayipha ikhadi, ukubonwa kobuso kunye nezinye iindlela zokuchongwa kunye nokulinganisa ubushushu, umkhuhlane uya kukhwankqiswa ngaphambi kokungena okanye ukuphuma, okunokwandisa ukhuseleko lootitshala kunye abafundi.
Ukulawula njani ukuhamba kwabafundi ngexesha kunye nolawulo lokufikelela?
Ootitshala nabafundi kufuneka bajonge kwi-terminal ekrelekrele xa bengena kwisakhiwo sokufundela emva kolwazi lomntu kunye nobushushu obuvunyiweyo.
Indlela yokulawula ukungena kunye nokuphuma kwindawo yokulala?
Indawo yokuzazisa yokukhangela ubuso kunye nomlinganiselo wobushushu ubekwe kwindawo yokungena nokuphuma kwisakhiwo ngasinye segumbi lokulala elisekhampasini.Abafundi bangazichaza kwaye balinganise ubushushu ukuze baqinisekise ukuba ulawulo lokufikelela kukhuseleko lomfundi ngamnye.
Indlela yokuhambisa ulawulo lwekhampasi?
Kwiilayibrari, izakhiwo zokufundisa, iiresityu, izakhiwo zeofisi, iholo yezemidlalo nezinye iindawo esikolweni, iitheminali zobuso ezikrelekrele zisetyenziselwa ukugubungela inqaku ngalinye ukwenzela ukubakho ngexesha lokhuseleko kunye nolawulo lokufikelela.